Ndainzwa pressure build up mukati apa matinji achinyerekedza! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndainzwa pressure build up mukati apa matinji achinyerekedza!
Ndakanzwa mota ichiridza hotter, yainge iri Uber yainge yasvika apa ndainge ndisati ndapedza. Ndakazvitarisa pa mirror last time ndisati ndabuda. Ndakanhonga purse yangu, keys, phone ndokubuda ndichimhanya, ndainge ndatumirwa Uber Black apa it was Mercedes Benz AMG iri yeblack.
Handina kuziva kuti George ainge arimo already mukati, ndakanzwa voice richindideedza zvikanzi babe handei. Ndainge ndisingazive kwataiyenda or kuti ndaizodzoka kumba here that night chandaiziva ndechekuti he was taking me out and then tozotaura zvekuita after that. Ndichisvika pamota ndakatambirwa ne smile apa munhu ainge akachena, ndakavhurirwa door ndikapinda haaa treatment yacho ndainge ndiri princess chaiye that day.
Akaburitsa champagne bottle ndokubva anditarisa straight mumaziso achindidirira, inini ndainge ndaikuita kunge imbwa iri pa heat kana kutsva kwandainge ndakunzwa ndakashaya kuti zvabva kupi, ropa rainge rakumhanya muviri wese beche rangu richiita kuvhita vhita but ndisingagone kuribata kana kukwenya since ndainge ndisingade kuita too forward.
George akaudza driver kuti we can go, ndokubva atanga kubvunza the usual “How are you? “ apa inini mupfungwa ndainge ndatotanga kuita imagine achindisvira but ndainge ndisingazive kuti achamisa mota paside peroad here kana kuti achandiyendesa kumba kwake.
Ndakapindura one word ndikati ” Good”
Pfungwa dzangu dzakatanga kumhanya futi ndikazviudza kuti muroad won’t be perfect because anozondisvira achimhanya but if given chance ndingade kuti andisvirire pa kitchen counter, ndichiwona mboro yake ichipinda nekubuda ndichinakirwa nekuchemerera. Ndobva ndatanga kumurumirira nzeve iye obva awedzera kunyudza mboro yake, ndobva ndaita kamwe kamhere kekumupa manyemwe kuti arambe achisvira.
Ndakabvunza kuti so “Where are we headed tonight?
Imagination is a powerful thing. ndakatanga kufunga kuti pamwe mboro yake is a masterpiece, yakareba and yakafuta apa I imagined yakaiswa mubeche rangu yakaita kurizadza. I knew kuti ndaizonakirwa semunhu ainge anenguva asati asvirwa, ndainge ndakutojaira kushandisa chiVibrator changu chandainge ndatengerwa neimwe shamwari yangu after my last break up.Ahh masasi, It had been long since ndanyatsosvirwa saka pfungwa dzangu dzaiyita kubika every scene kurikuda kusvirwa chete as much as George looked like a gentle ndainge ndamubvisa hembe nekumusvira zvese izvi zvaiyitika mupfungwa dzangu.
Takasvika kune this bar like restaurant yainge ine some dark corners zvekuti waiwona only couples vakagara vakaita kunyura mumasofa vamwe vacho waiwona vakadzi vakaita kugarira murume kunge varikutosvirana but I didn’t judge nekuti zvandiinzwa ipapo dai avhura kondom akapfeka ndaifongora right there ndomupa beche rese. Ndakasvika ndikagara pasi ndikanzwa kuti no bhurugwa rangu ratota, beche rainge raita kunyorova nekunzwa kuda kusvirwa but this was our first night out saka semunhu ainge ajaira chiVibrator, ndakangoti ndinonopedzisira kumba kana pasina zvinenge zvaitika kuno.
Ndainzwa pressure ichiita kuita build up mubeche rangu, ndonzwa matinji angu achinyerekedza zvekuti ndaida kunzwa mboro yake ichiita kuakwizirira. Takadya that night and the only thing chandakawana was a kiss padama ndikatoona munhu akuita request Uber and in no time tainge tavakubuda kudzokera kumba, ndainyara kusumuka coz ndainge ndisingazive kuti couch yatota here nebeche rangu pamwe rakadhinda pacouch iyoyo.
I really wanted kusvirwa na George but that night was going to happen. Ndakamhanya mumba ndisati ndavhura door ndakanzwa George akadeedzera kuti have a Good night, apa inini ndainge ndakutomhanyira chiVibrator changu. Too bad handina kusvirwa naGeorge but ndakazviudza kuti ndikawana mukana naye next date tinenge tirimumba achindisvira husiku hwese.
Previous articleNdakaita kupomba chinhu kusvikira ndakunzwa kuda kutunda!
Next articleCouple yakabatwa ichiita kaQuickie musango kuBulawayo